Saddex kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo lagu doortay Baydhabo iyo mucaaradka oo mar kale hadlay – Kalfadhi
Magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa lagu doortay saddex kamid ah kuraasta Golaha Shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay degaannada dowlad-goboleedka Koonfur-Galbeed.
Kursigii koowaad waxaa uu ahaa HOP#180:
Kursigan waxaa ku guuleystay Saadaad Maxamed Nuur Aliyow, oo horay u ahaa wasiirkii ugu horreeyay ee Wasaaradda Waxbarashada KGS. Saadaad ayaa helay 87 cod, halka musharraxii la tartamayay ee Maxamed Axmed Maxamed uu isagana helay 9 cod, waxaana halaabay afar cod.
Kursigan waxaa horay ugu fadhiyay Daahir Cabdi Cabdulle Dr. Go oo ka tanaasulay in uu mar kale u tartamo.
Saadaad Maxamed Nuur Aliyow, oo ah xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ah ee WADAJIR, oo goobta doorashada ka hadlay ayaa sheegay in si cadaalad ah ay u dhacday doorashada.
Kursigii labaad waxaa uu ahaa HOP#213:
Doorashada kursigan waxaa ku guuleysatay Aamina Maxamed Mursal oo ah la-taliyaha dhinaca haweenka & xaquuqul insaanka ee madaxweynaha Koonfur Galbeed. Marwo Aamino oo heshay 79 cod ayaa ka adkaatay Aamino Xuseen oo iyadana heshay 12 cod, waxaana halaabay 6 cod.
Kursigan waxaa horay ugu fadhiyay xildhibaan Yacquub Cali Maxamed.
Kursigii saddexaad waxaa uu ahaa HOP#154:
Kursigan oo ahaa kii ugu dambeeyay ee doorashadii maanta ka dhacday magaalada Baydhabo waxaa ku guuleysatay Sareeda Maxamed Cabdala oo afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhisay, waxaana ay heshay codad dhan 89-cod, halka musharraxii la tartamaysay ee Fardowsa Ibraahim Cabdi ay heshay 8-cod, waxaana halaabay 4-cod.
Dhinaca kale afhayeenka Midowga Musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdishu ayaa sheegay in mowqifkoodii ku aadanaa arrimaha socda aysan jirin wax iska bedelay, ayna aaminsan yihiin in waxa socda ay yihiin boob qaawan oo aan doorasho lagu sheegi karin.
“Waxaan wali ku guda jirnaa kulamadii aan la yeelanaynay qeybaha kala duwan ee bulshada si loogu gudbo hannaan doorasho la aqbalsan yahay,”ayuu yiri afhayeenka midowga musharaxiinta.
Waxaa xusid mudan in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shalay kulan la yeeshay xubnaha Midowga Musharraxiinta, uu ballanqaaday in Golaha Wadatashiga Qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii si wadajir ah looga shaqeyn lahaa in doorashooyinka dalku ay u dhacaan si hufan leh, loona saxi lahaa qaladaadka jira.
Archives Select Month January 2022 (29) December 2021 (42) November 2021 (59) October 2021 (73) September 2021 (40) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)